NdinguSalwa, ndinguSalwa, uAnasalwa yimagazini yenkcubeko yobugcisa
NgoLwesihlanu, nge-1 kaJulayi 2022
Umtshakazi ukhumbula unina ofileyo emtshatweni wakhe aze adanise naye ngomboniso ochukumisayo
Unyamekela njani ubuhle bezandla zakho?
La mayeza anokubangela urhatyazo
Uyigcina njani impilo yengqondo yakho elona xesha lide?
Umtshato wosomashishini osisityebi waseTurkey, uLucian Arkas, kwintombi yakhe, eneminyaka engamashumi amane emncinci kuye.
Ummangaliso omangalisayo ekubulaweni kukaShaima Jamal.. Ingqina lalibandakanyeka ekubulaweni
Emva kwamathandabuzo, uAmal Maher wenza ikonsathi eCairo
Esi sizathu sokuba u-Shakira noPique baqhawule ... kungekhona ukukopela, okanye intombi yakhe e-blonde
Niqab, ukuthotywa inaliti, kunye nokuxhwilwa kwabantwana.
Amehlo asixelela ngokuphazamiseka kwemithambo-luvo
Yongeza ikholamu yecala
NdinguSalwa, ndinguSalwa, Anasalwa
Ifashoni kunye nesimbo
Iiwotshi kunye nezacholo
imitshato kunye noluntu
Uhambo kunye noKhenketho
Yenzekile ngale mini
Imizuzu emi-10 eyadlulayo
Umzuzu ochukumisayo kumtshakazi, owayefuna ukwabelana nomama wakhe ongasekhoyo kwitheko lomtshato wakhe, ke wenza imodeli yakhe ngekhadibhodi, ngelixa wayedanisa…
kwiiyure ezi-8 ezidlulileyo
Unyamekela njani ubuhle bezandla zakho? Unyamekela njani ubuhle bezandla zakho? Izandla zizixhobo esizisebenzisayo ukunxibelelana nehlabathi elisingqongileyo…
La mayeza anokubangela i-cataract La mayeza anokubangela urhatyazo ngelixa izikhombisi ze-cholesterol ephezulu ziqinisekisa…
kwiiyure ezi-9 ezidlulileyo
Uyigcina njani impilo yengqondo yakho elona xesha lide? Uyigcina njani impilo yengqondo yakho elona xesha lide? Ukufikelela kwiminyaka engamashumi amane...
kwiiyure ezi-10 ezidlulileyo
Iisayithi zokunxibelelana kwezentlalo eTurkey zazixakeke ziindaba zomtshato wosomashishini baseTurkey abazizityebi, uLucian Arkas, oneminyaka engama-77 ubudala.
kwiiyure ezili-11 ezidlulileyo
Umtshutshisi woluntu waseYiphutha wabhengeza ukuba ekuphela kwengqina kwityala lokubulawa komsasazi uShaima Gamal wayebandakanyeka kulwaphulo-mthetho. Kwingxelo esemthethweni ngoLwesine, uthe...
U-Amal Maher ulungiselela ukwenza ikonsathi eCairo
kwiiyure ezili-24 ezidlulileyo
Kubonakala ngathi i-spark yeengxabano phakathi kwentliziyo yebhola yebhola ye-Barcelona, ​​uGerard Pique, kunye nenkwenkwezi yaseColombia u-Shakira, emva kobudlelwane obungaphezu kwesinye ...
usuku olu-XNUMX oludlulileyo
Ukuqweqwedisa abantwana yinto eyoyikisayo efunyanwa nguye wonke umama notata, ngakumbi ngokungabikho kokhuseleko kwezinye iindawo ezihlala abantu, nasemva kokusasazwa kwevidiyo…
Amehlo asixelela ngobukho bokuphazamiseka kwemithambo-luvo Amehlo asixelela malunga nobukho bokuphazamiseka kwemithambo-luvo Kuhlala kusithiwa “amehlo asixelela yonke into”,…
I-GRAF ityhila i-GRAFABULOS
Salwa Azzamusuku olu-XNUMX oludlulileyo
I-POMELLATO ibonisa ingqokelela entsha kunye nenhle ye-ICONICA yeentsimbi zomqala, izacholo kunye namacici abonisa ubuhle bexesha laseMilanese.
kwiveki eyi-XNUMX edlulileyo
IBreguet isungula imodeli yayo yamva nje kwingqokelela yesiNtu, ukubhiyozela ukuyilwa kwewotshi yeTourbillon nguAbraham-Louis.
UChopard ngumshicileli wexesha elisemthethweni leMillia 1000 ixesha lamashumi amathathu anesihlanu.
kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo
UBlancpain usungula iimodeli ezimbini ezintsha zeFifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet iwotshi
UJacob & Co., uBucherer BLUE kunye neSothebys bathumela itourbillon yokuqala ye-axis emithathu emajukujukwini
Iphulo elitsha lezacholo eliphezulu le-GRAF lisebenzisa ubuhle obunomtsalane obuthi…
Amatyathanga asentliziyweni yelifa lePomellato kwaye i-Iconica ijonge kwikamva…
I-Breguet isungule imodeli yayo yamva nje kwingqokelela yesiNtu, ekubhiyozeleni…
Kunyaka we-XNUMX olandelelanayo, iChopard iyaziqhenya ngokubambisana kwayo ...
Salwa Azzamkwiiyure ezi-10 ezidlulileyo
Iisayithi zokunxibelelana eTurkey zazithe phithi ziindaba zomtshato womnye woosomashishini abazizityebi baseTurkey, uLucien Arkas...
Ubuntu bakho busekelwe kwimilo yeminwe yakho
Ukuziphatha okune kokuphila ubomi obungonwabi kunye neqabane
Indlela yokwenza isipaji sakho sihlale sigcwele
Ubume beenyawo zakho buchaza ubuntu bakho!!
Salwa AzzamImizuzu emi-10 eyadlulayo
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo
Ukubanjwa kombulali kaShaima Jamal, kwaye yile nto bayifumana kunye naye kwindawo yakhe yokuzimela
USawiris uhlekisa ngokurhoxa kukaHani Shaker, ivenkile emfutshane enexabiso eliphantsi
UMarilyn Monroe .. ebuntwaneni obulusizi, ukukrwitshwa, ukuxhatshazwa, ukungabi nakhaya .. kunye nokufa okulusizi
U-Ivanka Trump okokuqala ngqa ngokuchasene noyise uDonald..ixoki kwaye ngaloo ndlela wamphoxa
INkundla ePhakamileyo yaseBhritane imangalela amaphephandaba asenokuba ayimela kakubi iNkosana uHarry
Umongameli waseFransi uFrancois Hollande ubhengeza umtshato wakhe kwisithandwa sakhe esiyimfihlo uJulie Gabe, emva kwehlazo kunye nokwahlukana.
INkosana uHarry kunye nentombi kaMeghan Markle uLillipet kwimbonakalo yakhe yokuqala kunye nokuqokelela imali emnandi
Iyintoni ingcaciso yobuhlobo bokwenene?
Yeyiphi imibala ye-makeup ehamba phambili kolu kwindla?
Eyona ndawo ibalulekileyo kunye neyona ndawo intle ekufuneka uyindwendwele eDubai
Imfashini iphinda iphindaphinda ... kwaye ibhanti ebanzi ihlobisa idizayini yokuwa
U-Khalid bin Mohamed bin Zayed usungula iQhinga lezoShishino lase-Abu Dhabi ukuhlanganisa isikhundla se-emirate njengeziko loshishino elithathwa njengelona likhuphisanayo kulo mmandla.
UPhakamileyo uSheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ilungu leBhunga eliLawulayo le-Emirate yase-Abu Dhabi kunye nentloko yeOfisi yesiGqeba sase-Abu Dhabi, esungulwe namhlanje,…
Ubume beenyawo zakho buchaza ubuntu bakho!! Ubume beenyawo zakho buchaza ubuntu bakho!! Kukho umahluko kwimilo yeenyawo kunye nobukhulu beenzwane, njengoko...
Buyisa imiyalezo ecinyiweyo kuWhatsApp
Ukufumana kwakhona imiyalezo ecinyiweyo kuWhatsApp Ubuyise imiyalezo ecinyiweyo kuWhatsApp Uhlala ufumana imiyalezo evela kubantu abakuluhlu lwefowuni yakho,…
URyan Sheikh Mohammedkwiiyure ezi-8 ezidlulileyo
Unyamekela njani ubuhle bezandla zakho? Unyamekela njani ubuhle bezandla zakho? Izandla zizixhobo esizisebenzisayo ukunxibelelana nehlabathi elisingqongileyo kunye nokwenza…
Uluthandayo unyango lwasehlotyeni kwiLegend Spa
I-UNESCO kunye no-Abu Dhabi bapapasha ingxelo entsha malunga nefuthe loqoqosho lwe-Covid-19 bhubhane, ebangele ilahleko ye-40% yengeniso yecandelo lenkcubeko kunye nemisebenzi engaphezu kwezigidi ezili-10.
Utata wexhoba, u-Iman Arsheed, uxelela umnxeba wakhe wokugqibela kunye nomyalezo woloyiko
Ingozi embi ityhoboze imoto kaRonaldo kwaye ixabisa imali eninzi
Al Muhairi: Ubunkokeli obunobulumko buzimisele ukukhuthaza isenzo esidibeneyo seGulf kwifayile yokhuseleko lokutya
Ukubonakala kweenkwenkwezi zase-Arab ukusuka kumaqela ehlobo
Iinkangeleko zeenkwenkwezi zama-Arabhu kumatheko ehlobo zazingaphezulu kokumangalisa.
Izibuko zibaluleke kakhulu kumandla azo, ngoko zisebenzise ngokuchanekileyo
Izinto ezintlanu ozaziyo malunga no-Aquarius
Izinto ezintlanu ozaziyo malunga no-Aquarius Izinto ezintlanu ekufuneka uzazi malunga ne-Aquarius 1- I-Aquarius inemigangatho yayo ...
Konke okufuneka uyazi malunga noLeo obhinqileyo
Iinkcukacha malunga nobuntu bomfazi woMhlaza
Konke okufuneka ukwazi malunga nomfazi weGemini
Yazi iTaurus female kuzo zonke iinkcukacha zayo
Amaqhinga amathathu e-Facebook afihliweyo owaziyo
Ngaba iincoko zakho kuWhatsApp zikhuselekile?
Okokugqibela, eyona nto ibalulekileyo kunye nelindelweyo ye-WhatsApp
Yiba namava kwiiPaneli eziSixhenxe… i-XNUMXD adventure yesidlo esingalibalekiyo sangokuhlwa
Salwa AzzamKwiintsuku ezi-3 ezidlulileyo
Yazi indlu ka-Adolf Hitler.. awuyi kukholelwa ukuba yimalini
Imenyu yehlobo ephucukileyo ilindele eRaffles Dubai Spa
Bhiyozela uSuku lukaTata eRaffles Dubai ngamava e-brunch angalibalekiyo
kwiiveki ezi-4 ezidlulileyo
IDubai yindawo ekhethekileyo egcina isantya sophuhliso lweendlela zokuhamba zehlabathi kwaye ihlangabezana neminqweno yabahambi.
I-Shangri-La yamkela ixesha lasehlotyeni ngephakeji yeholide yoSuku lweeLwandle lweHlabathi
URyan Sheikh Mohammedkwiiyure ezi-9 ezidlulileyo
Imixholo Ejongwe kakhulu
Amanqaku amva nje
© Copyright 2022, onke amalungelo agciniwe | NdinguSalwa
Yiya kwiqhosha eliphezulu
Iindlela ezi-5 zokuthintela umsi wecuba
Yintoni i-hyperbilirubinemia kwaye zithini iimpawu zayo?
Xa abantu bekhobokisa kuwe baze banamathele kuwe?
Ziziphi iimpawu zokwandisa ulwazi emntwini?
Iimpahla ezivela kubayili be-Arab kwiiMbasa zeVidiyo zoMculo zika-2019
U-Elissa uthatha umhlala-phantsi kubugcisa kwisigqibo esothusayo
Indlela yokuba ngumntu ocinga kakuhle
Khetha isipho Day sikaTata ngokobuntu bukayihlo
Bhalisa ngoku simahla kunye noAna Salwa Uya kufumana iindaba zethu kuqala, kwaye siya kukuthumelela isaziso sentsha nganye Hayi Ewe
Ngenisa ixabiso elahlukileyo: